रघुजी पन्तलाई कोमलको प्रश्न– तपाईको पार्टीका नेतृहरू कसलाई पिँडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुगे ? - Ganatantra Online
रघुजी पन्तलाई कोमलको प्रश्न– तपाईको पार्टीका नेतृहरू कसलाई पिँडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुगे ?
काठमाडौं । माधव समुहका नेता रघुजी पन्तले दिएको अभिव्यक्ति लिएर राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले पन्तको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । महिलाको विषयलाई लिएर नेता पन्तले दिएको अभिव्यक्तिमा नेतृ ओलीले सवाल उठाउँदै चक्रपथलाई भन्नुभयो, ‘रघुजी पन्त पहिलादेखि नै कुण्ठा बोकेको मान्छे हो । उहाँको अभिव्यक्ति हेर्ने हो, सुन्ने हो भने त अब कुनैपनि महिलाले काम गर्नु नै भएन, सफलता प्राप्त गर्नु नै भएन।’
नेतृ ओेलीले नेता पन्तले महिलाको विषयलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिमा महिलाको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि धावा बोलेको र महिलाको क्षमताको अवमूल्यन गरेको बताउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका स्टाटस लेख्दै उहाँले भन्नुभएको छ , हामीले नेता मानेका रघुजी पन्त कति निच हुनुहुँदो रहेछ भन्ने बल्ल आएर खुलेको छ । पन्तजीलाई मेरो प्रश्न : तपाईको पार्टीमा कुनै पदमा रहनु भएका महिला नेतृहरुले को कसलाई पिंडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्नु भएको हो ? के यो देशमा महिलाले कुनै काम गर्न, कुनै पदमा पुग्न र सफलता हाँसिल गर्न तपाईको जस्तो दरिद्र सोचको सिकार हुनुपर्छ ?
ओलीले थप अगाडि लेख्नुभएको छ,पूर्वीय दर्शनदेखि मानव विकासमा महिलाको उच्च सम्मान समाजको कसीमा उत्तीर्ण भएर भएको छ । प्रकृतिले नै महिला र पुरुषको समायोजन गरेको हो । एकअर्काको आदर सम्मान विना समाजमा न्याय समानता र विवेकशीलताको अन्त हुन्छ । समाज हिंसातिर जान्छ र दया करुणा जस्ता कुरा हराउँछन् । तसर्थ एकले अर्कालाई सम्मान गर्नु जीवनलाई मर्यादित र सरल बनाउनु हो । तर नेकपाका नेता रघु पन्तले महिलाहरुले प्राप्त गर्ने पदहरु पिंडुला देखाएर भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँको मानव विकासका क्रममा बन्ने तन्तुहरु विचैमा रोकिएको जस्तो छ । उहाँले प्रयोग गर्ने शव्दहरुले आफ्नो आमा दिदीबहिनी सबैलाई अपमान गरेको छ । विवेकहीन मानिसको आलोचना ले आफैलाई आलोचित गर्दछ यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टी र समाजको दुर्घटना कति टाढा होला ?
रघुजी पन्तले २० औँ वर्ष संघर्ष गरेका, विवाह नै नगरी पार्टीमा योगदान दिएका महिलाहरुले कहिल्यै टिकट नपाएको तर गोडा पिडुँला देखाउँदै पोइल जान पाम भनेपछि कोमल वलीलाई केपी ‌‌ओलीले सांसद बनाएको आरोप लगाउनुभएको थियो।
‘पोइल जान पाम भनेपछि सांसद त तिनै भइन् कपाल फुलेका बुढीहरुले केही पाएनन्’ पन्तको भनाइ छ। यसो भनिरहेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।